အစ္စလာမ်ဘာသာ | Danya Wadi
By danyawadi January 18, 2020 Leaveacomment
နှဈပေါငျး (၆၀၉) နှဈအရငျက တညျဆောကျထားတဲ့ တူရကီနိုငျငံရှိ တနျခြိနျ (၂၆၅၀) ကြျော ရှေးဟောငျး ဗလီတဈလုံးကို ရကွေီးမှုဒဏျမှ လှတျကငျးရာသို့ မဖွိုမဖကျြဆီးဘဲ ရှပွေ့ောငျး သယျဆောငျနကွေပုံ။ Aung Nwe Oo နှဈပေါငျး (၆၀၉) နှဈအရငျက တညျဆောကျထားတဲ့ တူရကီနိုငျငံရှိ တနျခြိနျ (၂၆၅၀) ကြျော ရှေးဟောငျး ဗလီတဈလုံးကို ရကွေီးမှုဒဏျမှ လှတျကငျးရာသို့ မဖွိုမဖကျြဆီးဘဲ ရှပွေ့ောငျး သယျဆောငျနကွေပုံ။ Aung Nwe Oo နှဈပေါငျး (၆၀၉) နှဈအရငျက တညျဆောကျထားတဲ့ တူရကီနိုငျငံရှိ တနျခြိနျ (၂၆၅၀) ကြျော ရှေးဟောငျး ဗလီတဈလုံးကို ရကွေီးမှုဒဏျမှ လှတျကငျးရာသို့ မဖွိုမဖကျြဆီးဘဲ ရှပွေ့ောငျး သယျဆောငျနကွေပုံ။ Aung Nwe Oo နှဈပေါငျး […]
Islamic Religious EBook List ( 652 Books)
By danyawadi December 3, 2019 Leaveacomment
Download Link:– http://myanmarfreeislamicbooks.blogspot.com/2014/03/blog-post_2405.html Book List http://myanmarfreeislamicbooks.blogspot.com/p/book-list.html Refurbished Scanned EBook List ( 652 Books) Batch Four –3Books 652. ရစူလ်ကိုယ်တော်မြတ်၏ အနာဂတ်ဒေသနာကျမ်း 651. ဆွဒကဟ်ဂျာရိယဟ် စဉ်ဆက်မပြတ်အကျိုးစဝါးဗ်ရစေသော အလှူဒါန 650. အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ကလေမဟ် (၇)ပုဒ် အူရ်ဒူ၊ မြန်ာမာ အဓိပ္ပာယ် 649. ဒရူးသ်တော်မြတ်ကျင့်စဉ်ဖြင့် သင်၏ပြေလည်မှု 648. ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် အာရဗီ ၁၅ လိုင်း (မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဖတ်ပုံစံ) 647. နေ့စဉ်သောက်နေကြသော ဆေးဝါးတောင့်များ Medicine Capsules နှင့် အစ္စလာမ့်တရားတော်၏ အမိန့်ပညတ်ချက် 646. ဖသာဝါ အဆ်အဒီယဟ် အတွဲ (၁) Batch Three […]
Quran in Myanmar: ကွရ်အာန် မြန်မာ ဘာသာပြန်
By danyawadi November 8, 2019 Leaveacomment
ရွှေဘိုသခင်ကြီးလေးပါး ရာဇ၀င်နှင့် နန်းမျိုးနွယ် ၃၇၀၀ သမိုင်းအကျဉ်း
By danyawadi November 7, 2019 Leaveacomment
By danyawadi February 21, 2019 Leaveacomment
By danyawadi February 7, 2019 Leaveacomment
By danyawadi November 23, 2018 Leaveacomment
​ရေးသားသူ – သတိုးဟိန်းသူရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံတို့နှင့် အတူတကွ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး မိမိတို့၏ ဘာသာတရား ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်လာခဲ့သည်မှာ အများအသိပင် ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာလောကစင်္ကြာဝဠာ အပေါင်းအတွက် လာခြင်းကောင်းတော်မူသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ တမန်တော်ချုပ် မုဟမ္မဒ်သခင် (ငြိမ်းချမ်းပါစေ)၏ မွေးဖွားရာလဖြစ်သော အရဗီပြက္ခဒိန်ဖြင့် ရေတွက်လျှင် ရဗီအွလ်အောင်ဝလ်လ တွင် တမန်တော်မြတ်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ စုပေါင်း၍ မဟာတမန်တော်နေ့ အခမ်းအနားများ အစဉ်အဆက် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ တမန်​​တော်​​နေ့ များကို ယခုမှအသစ်​ပုံ​ဖော်​ ကျင်းပခြင်းမျိုး ဟုတ်​ပဲအ​စောဆုံး (၈)ရာစု​လောက်​ကတည်းက ကျင်းပခဲ့​ကြောင်း သမိုင်း အ​ထောက်​အထားများအရ​ ​တွေ့ရပါတယ်​။ထိုနည်းတူ မြန်​မာနိုင်​ငံတွင်​လည်း တမန်တော်နေ့များကို ယခုမှ တီထွင်​ ကျင်းပခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ မြန်မာဘုရင်များ […]
By danyawadi October 18, 2018 Leaveacomment
“မင်းနှင့်လွှတ်တော်က ဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုခဲ့သော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ” အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ ခရစ်ယာန် ဘာသာထက်စောပြီး မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကို “ပန်းသေး” ” ပသီ” လို့ခေါ်ကြောင်းသိရတယ်။ပုဂံခေတ်ကျောက်စာတွေမှာ”ပန်းသိမ်” “ပဲသည်”လို့ရေးသားထားတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် ပုဂံခေတ်ကတည်းက မွတ်စလင်မ်များ ရှိတယ်လို့ ယူဆ ရတယ်။ကုန်းဘောင်ခေတ်မှာ ကသည်းလူမျိုးများကို အက္ကပတ် လို့ခေါ်တယ်။မြန်မာ မွတ်စလင်မ် များကို ဇေတဗာရီလို့ခေါ်တယ်။ဇေတဗာရီ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က လေအောက်နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။မုတ်သုန်လေအောက်ကျရောက်တဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ အေဒီ ၁၄ ရာစုမှာ မွတ်စလင်မ်များ ဝင်ရောက်ပြီး ပေါ်တူဂီများနှင့်အတူ ရခိုင်ဘုရင် မြန်မာဘုရင်ထံမှာ အမှုထမ်းတယ်။ညောင်ရမ်းခေတ် စနေမင်း လက်ထက်မှာ မွတ်စလင်မ် အမှု့ထမ်းများကို ကုလားပျိုသေနတ် အစုလို့ ဖွဲ့စည်းပြီးထားခဲ့တယ်။ကုန်းဘောင်ခေတ် အလောင်း မင်းတရား လက်ထက်မှာ မွတ်စလင်မ် စစ်မှု့ထမ်းများ […]
By danyawadi June 29, 2018 Leaveacomment
တမန်တော်မွေးနေ့ ကဗျာရွတ်ပြိုင်ပွဲမှာ မွတ်စလင်မလေး မမဒါဝီကို ဆုရစေခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး ရေးပေးခဲ့သူ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ဆရာကြီးရွှေဘို ဖုန်း စည် ခေါ် ဦးစိန်ဝင်းကိုေးလးစားစွာ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုပါ၏။ ====================== အစ္စလာမ်ဘာသာ မဏ္ဍိုင်ငါးခု အခြေပြုလို့ ခိုင်မြဲစွာ ဂုဏ်တော် ကလေမာ ဂါထာရွတ်ကြ နမတ်ဇ်ဝတ်ပြု နေ့စဉ်သာ ဖွဂျေ ဇဟိုရ် အစွာ ဖတ်ကြ မဂ္ဂဒစ် အေရှာ ငါးကြိမ်သာ ဥပုဒ်ရိုဇာ အကျင့်မြတ်နဲ့ ဇကာဒ်ဒါန ပေးလှူပါ မြို့တော်မက္ကာ အရောက်သွားလို့ ကအဗ္ဗါကျောင်း ဝတ်ပြုပါ လောကီဒွန္နယာ ဒီဘက်ကမ်းမှ ဂျန္နတ်ဘုံနန်း ရောက်ဖို့ရာ မဏ္ဍိုင်ငါးဖြာ အခြေပျိုးမှ ဟေဒါကောင်းကျိုး ဖြစ်ရမှာ အဲဒါမှ ကောင်းချီး စလဝါဒ် အမြတ် ဟမ္မဒါ။